Okulandelayo | Izincwadi Zobuholi
UCheryl Cran ungumlobi wezincwadi eziyisikhombisa zokuhola phambili kufaka phakathi incwadi yakhe entsha, “I-NextMapping ™ - Lindela, Zulazula futhi Wenze Ikusasa Lomsebenzi "Kanye nomthengisi wakhe omkhulu"Ubuciko Bobuholi Bokuguqula - Ukushayela Ukushintshwa Ezweni eliDlondlobala Lisheshayo”(Wiley 2015).
I-E-Book entsha nezinye izincwadi zizofika kungekudala.
Manje iyatholakala! Oda ikhophi yakho namuhla!
I-NextMapping ™: Lindela, Zulazula futhi Wenze Ikusasa Lomsebenzi
Uhlelo lwesibili olunemininingwane ebuyekeziwe neyezincwadi zomsebenzi ezihambisana nalo zilungele ukuthengiswa ngoFebhuwari 4, 2020. Le nguqulo ivumela abantu, abaholi namaqembu ukudala ikusasa labo bese bemephu 'Okulandelayo.'
Ijubane lokushintshwa lishesha kakhudlwana kunokuba lalineminyaka eyishumi edlule kanti i-40% yanamuhla eyi-Fortune 500 ngeke ibe khona eminyakeni eyishumi ezayo. Kunesidingo esiphuthumayo sabaholi abasebenzela phambili, amaqembu nosomabhizinisi abafuna ngenkuthalo futhi basebenzise amasu wokwenza ikusasa lomsebenzi.
Ku-'The Art of Change Leadership - Driving Transformation In A Fast Paced World, 'ngihamba ngabafundi ngohambo lokuthuthukisa ubuholi lokuthi ungaba kanjani umholi wezinguquko odala imiphumela yakusasa namhlanje. Kufaka phakathi ukuthi ungasithola kanjani isitayela sakho somholi woshintsho, nokuthi ungathonya futhi uthinte kanjani abanye ukuba babe abaholi bezinguquko.
Sinezinhlinzeko ezikhethekile zama-oda amaningi uma usu-oda noma iyiphi imali engezansi usithumele i-imeyili info@nextmiling.com ngobufakazi bakho bokuthenga futhi sizokunikeza ibhonasi yakho!
Izindlela ze-101 Zokwenza iGenerations X, Y neZoomers zijabule emsebenzini
Cabanga unyaka we-2020 Ngabe ibhizinisi lizobukeka kanjani? Ngabe ibhizinisi lizoshintsha kanjani ngenxa yomthelela wokukhiqizwa? Kule ncwadi ebonisana nomlobi uCheryl Cran, i-CSP inikezela ngezindlela ze-101 zabaholi nabaninimabhizinisi ukukhulisa ukuzibandakanya kwabasebenzi nokwaneliseka kwemisebenzi. Ucwaningo lukhombisa ukuthi uGen X no-Y bakulungele ukubheka umsebenzi kwenye indawo uma bengajabule emsebenzini. Ngokushesha futhi kulula ukufunda namathiphu amaningi abalulekile.
Ubungcweti Bobuholi Esikhathini Sedijithali: Ungahola Kanjani Uguquko, Uguqule Abantu Futhi Ukhulise Ibhizinisi
Njengomholi, isidingo samakhono athuthukisiwe siyakhula. Umholi wesikhathi esizayo ungumholi obambisanayo futhi isitayela esidala sobuholi bokulawula nokulawula asisayihlukanisi. Abaholi bamanje badinga ukuguquguquka nokuzivumelanisa nezimo nabaholi bezinguquko. Kule ncwadi, kunikezwa amasu okuthuthukisa ubuholi kokuthi zingakhuliswa kanjani zonke izindawo zokuba ngumholi kufaka phakathi, amakhono asekelwe ebuholini anjengokuxhumana, ukuphatha izingxabano, ukubhekana namaqembu akude, ukukhulisa ukufaneleka kwezobuchwepheshe nokunye.
Bhalisa manje ukuze waziswe ngokushicilelwa okuzayo